Isipikha se-Mid Long Range
Line Array Somlomo
Isikhulumi Seshashalazi Yasekhaya
Isikhulisi Setiyetha Yasekhaya
Iphrosesa yedijithali ye-KTV
Ihhovisi kanye ne-Warehouse
12-intshi ochwepheshe bebanga eligcwele...
12-intshi izindlela ezimbili zobubanzi obugcwele ...
15-intshi izindlela ezimbili zobubanzi obugcwele ...
I-Sound Active kanye ne-Passive
Ukuhlukaniswa komsindo okusebenzayo kubizwa nangokuthi i-active frequency division. Iwukuthi isignali yomsindo yomsingathi ihlukaniswa kuyunithi yokucubungula emaphakathi yomsingathi ngaphambi kokukhuliswa yisekethe yesikhulisi samandla. Umgomo wukuthi isignali yomsindo ithunyelwa kuyunithi yokucubungula emaphakathi (CPU) ...
Zingaki izici ezintathu ezibalulekile zemisindo yasesiteji ozaziyo?
Eminyakeni yakamuva, ngokuthuthukiswa komnotho, izethameli zinezidingo eziphakeme zokuhlangenwe nakho kokuzwa. Kungakhathaliseki ukuthi babuka imidlalo yaseshashalazini noma bajabulela izinhlelo zomculo, bonke banethemba lokuthola injabulo yobuciko engcono. Iqhaza lama-acoustics esiteji ekusebenzeni seligqame kakhulu,...
Sebenzisa kahle isikhathi sokuqala, amaphrojekthi we-Lingjie TRS Audio agcwele yonke indawo
NO.1 Guojiao 1573 Southwest Union Muva nje, umhlangano wesifinyezo sokuphela konyaka ka-2021 we-Guojiao 1573 Southwest Alliance Association kanye nomhlangano waminyaka yonke wokuhlela wango-2022 ubanjelwe ngempumelelo ehhotela e-Chengdu. Lo mcimbi usebenzisa izipikha zomugqa we-G-20 ezimbaxambili ezingu-10-intshi ezinamandla ochwepheshe be-TA...
Iphathi Entsha Yokwamukela Abafundi | I-TRS AUDIO.G-20 imigqa emibili eyimigqa engu-10 isiza i-Chengdu Ginkgo Hotel Management College ukuthi ifike esiphethweni!
Ngokushesha, kusukela phakathi nehlobo kuya ekwindla sekwephuzile. Noma umoya ushaya kamnandi, kodwa ukufudumala ngeke kwephuze. Ngobusuku bangomhla zingama-28 kuMfumfu, kwangeniswa iphathi enkulu yaminyaka yonke yokwamukela yaseChengdu Ginkgo Hotel Management College. Ngenxa yesikhathi esikhethekile sokuvimbela nokulawula ubhubhane, ukuze...
Ungakugwema kanjani ukuhhewula lapho usebenzisa okokusebenza okulalelwayo?
Ngokuvamile endaweni yomcimbi, uma izisebenzi zasendaweni zingawuphathi kahle, umbhobho ukhipha umsindo onzima lapho useduze nesikhulumi. Lo msindo onokhahlo ubizwa ngokuthi “ukuhewula”, noma “ukuzuza impendulo”. Le nqubo ibangelwa isignali yokufaka yemakrofoni eyeqile, ...
I-Lijinghui Leisure Club iqhakaza ngesasasa
I-Shaoguan Lijinghui Leisure Club iyiklabhu yokungcebeleka eholwa yintsha, imfashini, nesimanje, enesevisi ecabangelayo, umsindo okhokhelwayo nokukhanya okukhazimulayo njengendawo yokuqala, futhi izibophezele ekudaleni ulwazi olusha lokuzijabulisa. Ukukhanya okuhle nokukhaliphile kungamathe...
Izinkinga eziyi-8 ezijwayelekile kubunjiniyela bomsindo obuchwepheshile
1. Inkinga yokusabalalisa isignali Uma amasethi amaningana ezikhulumi efakwe kuphrojekthi yobunjiniyela bomsindo ochwepheshe, isignali ngokuvamile isatshalaliswa kuma-amplifiers amaningi nezikhulumi nge-equalizer, kodwa ngesikhathi esifanayo, futhi iholela ekusetshenzisweni okuxubile kwama-amplifiers. futhi ukhulume...
Ungabhekana kanjani nomsindo we-acoustic
Inkinga yomsindo wezikhulumi ezisebenzayo ivame ukusihlupha. Eqinisweni, inqobo nje uma uhlaziya futhi uphenya ngokucophelela, umsindo omningi womsindo ungaxazululwa uwena. Nansi incazelo emfushane yezizathu zomsindo wezikhulumi, kanye nezindlela zokuzihlola kuwo wonke umuntu. Bheka lapho...
Icala lokuqinisa umsindo lochwepheshe -I-TRS AUDIO ikhulisa iXinjiang Kuche Da Nang City iphenduke imakethe yasebusuku enhle
I-Xinjiang Kuche Nang City yasungulwa ngo-2013. Ipaki yokuqala ye-Nang Cultural Industry e-Xinjiang. Akusona nje isikhungo esigxilile sokukhiqiza nokuthengisa saseNaan, kodwa futhi iyindawo engavamile yokuvakasha yesintu, eheha inani elikhulu labavakashi basekhaya nabangaphandle ukuze babone indawo. Ngo-2021, ku...
Umehluko phakathi komsindo wochwepheshe nomsindo wasekhaya
Umsindo wochwepheshe ngokuvamile ubhekisela kumsindo osetshenziswa ezindaweni zokuzijabulisa ezichwepheshile njengamahholo okudansa, amagumbi e-KTV, amatiyetha, amagumbi enkomfa nezinkundla. Izikhulumi ezichwepheshile ziphethe ukuzwela okuphezulu, ukucindezela komsindo okuphezulu, ukuqina okuhle, namandla amakhulu okwamukela. Ngakho-ke, yiziphi izingxenye ...
I-TRS AUDIO idala ihholo elinemisebenzi eminingi eFuyu Shengjing Academy
Isingeniso sephrojekthi Le phrojekthi idizayini yesistimu yomsindo wehholo elinemisebenzi eminingi yedolobha laseShenyang Fuyu Shengjing Academy. Ihholo elinemisebenzi eminingi lidume kakhulu ngenxa yemisebenzi yalo ehlukene. Ukuze kwakhiwe ihholo lesimanjemanje elinemisebenzi eminingi, iFuyu Shengjing Academy ine...
Ezinye izinkinga okufanele zibhekwe ekusetshenzisweni kwemishini yokulalelwayo
Umthelela wokusebenza kwesistimu yomsindo unqunywa ngokuhlanganyela impahla yomthombo womsindo kanye nokuqiniswa komsindo kwesiteji esilandelayo, okuhlanganisa umthombo womsindo, ukushuna, okokusebenza okuseceleni kocingo, isiqiniseko somsindo nempahla yokuxhuma. 1. Isistimu yomthombo womsindo Imakrofoni iyifir...
Ikheli: 7F, Litai Bldg, Luenfung Industrial Zone, Lishui Town, Nanhai district, Foshan, Guangdong, China